Nickel chiwanikwa chubhu Kugadzira - Sekonic Metals Technology Co., Ltd.
Unoda Kuwana Yako Yakakosha Simbi Pipe uye Tube?
Seknoic Metals Group Kugadzira uye Kupa Mhando dzakasiyana dzePombi uye Tubes Chikumbiro cheMakambani, Medical ect, Senge Seamless Steel Tube, Welded Pipe, Capillary Tube, Heat Exchanger, U Bend Tube ect, Tubes In Materials of Titanium Alloys, Nickel Based Alloys ( Inconel, Incoloy, Hastelloy, Nimoinc, Ect) uye Cobalt Yakavakirwa Alloys uye Staniless Simbi Zvikwepa uye Tubhu Senge 304 uye 316L Mapaipi.
Kana izvo zvinhu zvaunoshuvira zvisina kuiswa, ndapota taura nesu zvakadaro! Tichawana mhinduro.
Musono Simbi Tube
Seamless Simbi pombi inopetwa kubva kune yakatenderera simbi, uye pombi dzesimbi dzisina welds pamusoro pevhu.it inogona kukamurwa kuita inopisa-yakakungurutswa pombi, inotonhora-yakakungurutswa pombi, inotonhora-yakadhirwa pombi, extruded pombi, pombi jacking, nezvimwe.
Welded Tube mapaipi esimbi akagadzirwa nesimbi kana simbi yekumusoro mushure mekukanganisa uye kugadzira, uye kazhinji ari matanhatu mamita pakureba. Welded simbi mutopota ane nyore kugadzirwa muitiro, mukuru kugadzirwa kunyatsoshanda, mhando dzakawanda uye nokurondedzerwa.
Kupisa Exchanger Tube
Kupisa Exchanger Tubes anoshandiswa muShell uye Tube Heat Exchanger nemhando dzese dzekugadzira maindasitiri. Isu tinopa musika wakakura kwazvo kusarudzwa kweasina simbi mamakisi uye ine yakazara ruzivo rwekugadzira kupisa exchanger machubhu.
Nickel chiwanikwa Tube
Nickel Alloy Tubes inogadzirwa neNickel yakavakirwa zvinhu senge inconel, Hastelloy, Haynes, inopinda maalloys, iwo Iwo ari epamusoro-tembiricha alloy machubhu anogona kumira kumwe kunetseka pane yakanyanya tembiricha ye600 kusvika 1200 ℃ uye ine kugona kuramba oxidation kana ngura.mainly Kunyorera o yakakwirira tembiricha nharaunda uye ngura nemishonga indasitiri.
Titanium chiwanikwa Tube
Titanium alloy machubhu ane huremu huremu, akakwirira musimba uye akakwirira mune michina properties.Iyo inoshandiswa zvakanyanya mumidziyo yekutsinhana kupisa, senge tubular kupisa kuchinjanisa, coil kupisa zvinopisa, nyoka tubular kupisa kuchinjanisa, condensers, evaporator uye zvifambiso mitsara. maindasitiri emagetsi anoshandisa titanium machubhu seyakajairwa machubhu emidziyo yavo.
U Bend Tube anoshandiswa zvakanyanya mukupisa exchanger masisitimu uye zvishandiso pahwaro hwesimbi isimbi U-chubhu yakakosha munzvimbo dzakakosha uye dzakakomba minda yenyukireya uye petrochemical muchina kuvaka.Iyo anogona kugadzirwa nemaNickel alloys, Titanium Alloys, uye isina simba simbi.
Capillary Tube ndiwo machubhu ane madiki ekunze madhayamita asingasviki 10mm, anogona kugadzirwa aine zvinhu zve nickel alloys, senge inconel, invar, kovar, uye titanium alloy uye Stainless simbi, anoshandiswa zvakanyanya kuenzanisira optical sikero wedunhu, maindasitiri sensor, emagetsi zvigadzirwa redunhu dziviriro chubhu etc.
Coil Tube -PEX kazhinji 0.5cm kusvika 20mm dhayamita, 0.1cm kusvika 2.0mm muukobvu, yakazvimoneredza kana inodzinga mosquito-inodzinga coil; zvinowanzoshandiswa mumakemikari, michina, zvemagetsi, magetsi, machira, rabha, chikafu, Midziyo yezvokurapa, avhiyesheni, muchadenga, kutaurirana, peturu uye mamwe maindasitiri munda
Simbi isina tsvina 304L, TP316 / 316L ASTM A312, ASTM A213, A269 A270 Musono Tube
Nickel chiwanikwa Tube Inconel 718, Inconel 625, Inconel 600, Hastelloy C276, Hastelloy B, Invar 36, Kovar, Incoloy 800, Incoloy 925 ASTM B161, ASTM B163, ASTM B165, ASTM 167ASTM B407, ASTM 423, ASTM B444, ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626, ASTM B668, ASTM B677, ASTM B690, ASTM B729
Titanium chiwanikwa pombi Titanium isina musono pombi (Gr1 / Gr2) Titanium Weled Pipe ASTMSB338, ASTMB337, ASTM B861, ASTM B862
•••Yako Pipe uye Tubes Partner•••
Kunze Dhayamita Musono Tube: 6.0mm -350mm
Coil chubhu: 5.0 - 25.4mm
OD Kushivirira Zvinoenderana neVatengi Tsanangura Maitiro
Ukobvu / Kushivirira 0.5 - 3.0mm, coil chubhu: 0.3-2.0mm, +/- 10%
Kureba / Kushivirira 5.8meters kana 6meters kana yakagadziriswa, ± 0.5mm
Maitiro Maitiro Code yakadhonzwa, Yakajeka annealing, Mukati mebead kubvisa
Kupedza Chiedza annealing
Kupenya: 400 grit, 600 grit, Mirror: 800 grit / 8K
Kushanda Bhaira, Heating exchanger, Condenser, Uperheating hwemvura chubhu, Kubikira mvura pombi
Kavha Tubhu yega yega yakarongedzwa nehombodo bhegi yega ipapo bundle kana yakagadzirirwa
Stellite 6, Stellite 6B, stellite mhete, Chiwanikwa R26 bhaudhi, Haynes 25 Waya, Welding waya,